טוויטר wuxuu noqon karaa hab wanaagsan oo loogu qeybin karo nuxur taageerayaasha raacsan. Waxaan la xiriiri karnaa akhristayaasha, macaamiisha iman קארה iyo gaadiidka taraafikada boggeena internetka.
Sida Q1 2017, טוויטר wuxuu ku saabsan yahay 330 מיליון קפיצות של isticmaalayaal, פחות 10 מיליון דולר לרבעון הרביעי של 2016 (Ilo). Inkasta oo koritaanka uu yahay mid gaabis אה, Barkadda Dadka isticmaala ayaa jira. Si loo helo dhagaystayaasha dhagaystayaasha אה, waxaan u baahannahay inaan dhisno raadiye joogta ah oo raacsan.
כמו shabakadaha cale ee bulshada, waxay u baahan tahay ballanqaadka waqtiga iyo tamarta si ay ugu guuleystaan ​​טוויטר.
Kumanaan kun oo muslimiin אה ma dhacaan habeenkaas. Haddii aad ka fekereyso side aad ku bilaabi lahayd טוויטר, waxaan wadaagay talooyin khabiiro ku saabsan mowduuceena:
1 "Sidee loo helayaa raac dheeraad אה אה טוויטר אה?"
3 גארי לופר
4 ניקולס סקלייס
5 אהרון לי
6 ג’ון פול אגיאר
7 אלכס מוריסון
8 איוונה טיילור
9 ביל גסט
10 ארמן אסדי
11 גייל גרדנר
12 סוזן דולן
13 מיט ריי
14 רובן גאמץ
"Sidee loo helayaa raac dheeraad אה אה טוויטר אה?"
Waa tan liiska saaxiibbada si habaysan oo gaar אה –
גארי לופר / ניקולס סקלייס / ג’ניס וולד / אהרון לי / אדם קונל / ג’ון פול אגויאר /
תומס לורינביצ’יוס / אלכס מוריסון / פטריק קומבה / איוונה טיילור / אלן פולט / ביל גסט /
בארי ספריסטון / ארמן אסדי / מגהאן מונאגן / מדליין אוסמן / לילך בולוק / ג’ייקוב קאס /
כריס קרול / ראול טירו / גייל גרדנר / אוון כרמייקל / סוזן דולן / דניאל סקוקו / מיט ריי /
בן ברוזן / האריס שכטר / רובן גאמז / אן טראן
Mawduucyada sii kordhaya ee taageerayaasha טוויטר ayaa dhab ahaantii aan cusubeyn. Waxaan soo gaadhay khabiiro ka soo jeeda asal kala duwan לצד בלוגר, משווק, wakiilka guryaha ijaarada, kororaaga, af-hayeenka, ganacsadaha, iwm. Wixii talo אה.
Halkaan waxaa ka muuqda waxyaabihii u muuqday in a ka ka yimaadeen badankooda.
אבא של דהיסו דהאגייסטאיאל אה. טייאדה טיראד בדאן.
טוויטר ווה meel bannaan. Maqaaca tayada ee danaynaya dhagaystayaashaada.
Isku dhexmuuqda dadka raacsan, waxay ka jawaabaan ציוצים ואני יכול גם לחוות את Twitter.
Ku dar xisaabtarka טוויטר oo ay wehliyaan ololayaal kale oo suuq-geyn ah.
Isticmaal aalado, goobo, iyo adeegyo si aad u maamusho akoontiga טוויטר- ka ama raadinta waxyaabo.
וואה aynaan dib u eegin aasaaska.
Ku mahadnaq dhammaan asxaabteena waqtiga a ku kuaataan inay kaga jawaabaan mawduucayaga ku saabsan side loo helo taageerayaal badan oo טוויטר אה. Waan hubaa in talooyinkan ay bixiyaan fikradaha Qaar dib-u-habeyn istiraatiijiyadeena suuq-geynta iyo warbaahinta bulshada.
Haddii aan ku siin lahaa faahfaahin # 30 si aad u bilowdo sii kordhaya taageerayaasha טוויטר – U sheeg "היי" dadka kor ku xusan. Ku raaxayso!
Haddii aad leedahay wax ka duwan inaad ku darto, nala soo socodsii טוויטר או פייסבוק.
"RT-Jawaab celinta, Ka Hadalka, Kuwa Raacsan ee Cusub, Faallooyinka ku Saabsan Tabaha Dadka Kale, ka qeybgalka xafladaha טוויטר / sheekaysiga ayaa ah qaabab aasaasi ah oo lagu bilaabi karo ka qeyb galka iyo soo kaiidashada," איו ראקיייי.
אתר: Inta badan
Haddii aad rabto inaad hesho soo raacdo badan oo טוויטר אה, ג’ניס וולד waxay soo jeedinaysaa inaad raacdo dadka isla fikirka leh ee ku jira Twitter.
Wald waxa uu kalaylayay qalabka Twitter-ka iyo hababka page badan loo isticmaalo. Halkan, waxay soo jeedinaysaa qalabka 3 in ay gacan ka geysato kordhinta taageerayaasha טוויטר,
Commun.It – עמוד של קלבאקה קייל אה אה אאד או הייחאי דאטקה isticmaala טוויטר-קיי (ציוצים). ווה דקאנקה טוויטר-קא inuu ראאקו דאבאקה, גאר אההאן חאדיאיי אאד מצב רוח. Sidaa darteed, haddii aad iyaga raacdo, oo ay blog ku saabsan waxyaabaha la midka אה, waxay kugula socon doonaan adiga.
Tweepi – Kaleab kale oo weyn oo aan isticmaalo. Waxaan hubiyaa inaan raaco ציוצים הואku fikir ah. Tweepi wuxuu i ogeysiinayaa Haddii aan seego שעווה uun. Haddii aan sameeyo, waxay iga saari doonaan iyaga oo ka welwelsan cabirkooda saamiga aan hadda ku sharraxay. Tweepi wuxuu iga caawiyaa inaan hubiyo inaanan cidna u gafin.
וולד, בלוגים iyo Tababaraha warbaahinta bulshada, ayaa sidoo kale xusay qaar ka mid ah habab dheeraad Ah. מרקה דאטקו דיב ugu soo qortaan maqaalkayga taageerayaashooda, waan raacaa. Sida iska cad, iyagu waa isla fikir ama ma doonayaan inay raacitaankoodu akhriyo maqaalkayga. מרקאי דיב ugu soo qoraan qoraalkeyga, waan raacaa. מאדדאמה איי ייהיין אבא הוא קו פיקיר אה, ווקסאי ו וואנאגסאן ייהיין דיב-ו-סוצלינטודה. “
“Waxaa jira dabin ay in badan oo suuqleey iyo milkiileyaasha ganacsigu ku dhex dhacaan … iyagoo ka walaacsan cabirrada beenta Ah.” אדם קונל wuxuu xusayaa בכווית raacsan טוויטר-ka inay yihiin kuwa kale ee qiyamka nacasnimada אה ee naga leexin קארה waxa muhiimka אה.
"Waxay u Egtahay inay hoos u dhacdo si ay u hesho qaar ka mid ah taageerayaasha saxda אה, halkii ay ka heli lahaayeen taageerayaal horay."
Connell ayaa ku xusan in uu boosto ku soo dir Blog Blog,
Hadafkaagu waa inuu noqdaa אמצע קור u qaadaya bartilmaameed iyo ka-Qaybgal dadeed oo runtii rabta inay maqlaan waxa aad leedahay.
1. שלח דוא”ל ל- ku-qor magaca CTA
Tallaabooyin גאר אה אה קו ku jira habka aan u shaqeynayo, waxaan ku from doonaa wicitaanada taleefanka ku dhiirigeliya macaamiisheyga in ao i soo raacaan טוויטר (אני משתמש בפייסבוק).
CTA שלי waxay u muuqataa inay jilicsanaan jilicsan tahay markii aan ku jiray saxeexa iimaylka – waxaad samayn kartaa wax ka sii toos badan haddii aad doorbido.
בטח, Hab sahlan ayaa noqon lahaa ב- lagu daro widget-ga caan ah ee blog-ka ah – לאה יאאבי dhinaca kale.
Laakiin xaqiiqadu waxay tahay inaan helay natiijooyin aad u wanaagsan oo ka imanaya suuq-geynta emailka marka aan ka sameeyo warbaahinta bulshada. סיידא נרתע, מודנאאן אייאן ואהיא.
בקסטה oo קובאקה ראקדדיידה טוויטר- kauu gaabis u yahay sid, kuwa raacsan ee aan ku kasbado waxay noqon doonaan kuwo ku haw gal. Hadduu Twitterku dhinto, wali waxaan haystaa liiskayga e-may ..
2. Xeelad istiraatiiji אה iyo ka Qaybgal
Horaanba waxaan soo sheegnay muhiimadda haysashada soo socota ee rabta באאד מקאקו ווקסה אלעדאהיי.
Nidaam weyn oo lagu ansixiyo dadka isticmaala Twitter kuwaas oo ay u badan tahay inay ku raacaan adiga aya ah inaad raacdo, isku xirto oo aad la xiriirto kuwa la wadaagaya boggagaaga blog-ka.
אם אתה רוצה להוסיף את הבלוג של וואלהאייגייסה, אתה יכול להוסיף כתובת אתר וכתובת טוויטר. Laakiin, waxay kaliya la shaqeysaa qoraalo dhowaan dhaweyd.
Waan jeclahay inaan isticmaalo Buzzsumo taas sababtoo a waxay heystaan ​​macluumaad weyn.
Markii aan qoro URL-ga boostada, waxaan helaa liis la kala sooci karo oo ku saabsan kuwa la wadaagay boostada. Ka dib si toos ah ayaan uga daba socon karaa barnaamijka. אניגונה באה מהקרייה ‘המשפיע’ של הקריאה.
Taasi micnaheedu waa inaad sameyso שעווה ka badan jeclaan / dib ugu laabo boggagooda – waxaad u baahan טהאי inaad lahadasho. Hadana si ka sii fiican, ku caawi iyaga שעווה (Taasi waa hab dhakhso leh oo lagu xasuusto).
מרקאד טאן סיסיסו ווקסאד סיסנייאזה קסיריר מקנו לה – הל קוף מרקייבה.
Connell wuxuu raaciyay inaad sidoo kale ka gudbi karto kobcinta akoonadaada kale ee bulshada, ku dhiirigeliso kuwa raacsan inay ku soo biiraan liistada emaylkaaga oo aad u abuurto liis Twitter אה אה kuwa raacsan ee aad wadaaga. "Haa, waa mid gaabis אה oo aan si fudud שעווה u miisaamayn laakiin run ahaantii waa lacagbixin."
ג’ון פול אגיאר
תומס לורינביצ’יוס, ganacsade qaab nololeed iyo blogger ka yimid Lithuania ayaa wadaagaya siyaabo muhiim ah oo uu 3 u adeegsan jiray inuu koro taageerayaasha Twitter.
"Ugu horreyntii, waxaad u baahan tahay inaad ku saxdo פרופיל. Isticmaal sawirro tayo sare leh ee aad ufiiriso iyo dabool. קוראן macluumaad iyo mawduuca ביו. Bixi wixii kalsooni ah ee aad qabtid.
"Labaad, waxaad u baahan tahay inaad la socoto jadwalkaaga boostada. Waxaan jeclaan lahaa in aan istcimaalo istaraatijiyada 4-1-1 halkaasoo aan wadaagno 4 qaybo ka mid ah waxyaabaha la qiimeeyay, ציוץ מחדש qofkale fariin iyo ugu dambeyn la wadaag qaybta 1 ee CTA si aan u akhristo blogkaygaeo, ika qo חיץ waa hubkeyga xulashada ee otomaatiga.
"סדקס, איזקסקסי דדקה. Heerarka ka-Qaybgalka ayaa aad ugu hooseeya warbaahinta bulshada. Haddii aad wakhti Qaadatid si aad u akhridid ​​boostada qof, u sheeg בטוויטר. Haddii uu qof su’aal weydiiyo, qaado daqiiqadaas si aad uga jawaabto oo u bixiso qiime. Waxaa laga yaabaa באן la qiyaasi קארין, laakiin waxa ay iga caawisay באנג ראקו dheereeye עמוד oo kale oo aan fikrado u lahayn ציוץ ציוצים של buuxa מלאים בקישורים oo aan cidna wax akhrin. "
אתר: Istaraatiijiyooyin farsamo
פטריק קומבה wuxuu wadaagayaa qaab gaar ah oo lagu kobcin karo kuwa raacsan twitter-ka. Jawaabtayda waxaan ku soo koobi doonaa astaamo: ^ ”
קלמדה "^" waxay la mid tahay erayga "הכנס". Tusaale ahaan, waxaan isku darsaday wadahadal lala yeeshay dhowr saamileyaal, waxaanay raaceen 5-10 saacadaha 2, iyo 30 waxay booqdaan goobtayda saacadda 1.
Tusaale yar, waan ogahay, laakiin taasi waa sida ay u shaqeyso. Taasi waa calaamaddayda, waa side ugu fiican ee dariiqa caddaanka a ee ee caddaynta ah ee loo helo taageerayaasha טוויטר. Anigu waxaan shakhsiyan u leeyahay taageerayaal טוויטר ah 6000, oo dhan oo aan ku helo asal ahaan. Haddii aad rabto in aad si dhab ah u dhisto koontadaada heer sare ah, waxaad u baahan tahay inaad ku rido shaqada. וואה שאקו וואקטי בואכה אה חאדיאדי ראדיתי רבטו באאד סקסדהא.
Beddelka, Commbe, בלוגר iyo koraha, ayaa sheegay in ay jiraan shirkado isticmaala bot si ay u helaan taageerayaasha. "Ama waxaad raaci mapa wadada garaaca, oo isticmaal bot. Ma doonayo inaan been sheego, waxa a y shaqeysaa in ay raacaan dadka raacsan. Shirkado badan ayaa sameeya.
Waxaad ciyaari mapa ciyaarta ‘lasoco oo lasoco’ ama waxyaabo otomatik Ah shay aad kuhesho halkaad ka helayso soo bandhigid badan, iyo fursado badan oo aad ku heli karto kuwa raacsan. נסיב ווקאן! “Ayuu raaciyay.
Si aad u dhisto boggaan טוויטר, Allan Pollett wuxuu diiradda saaraa sidii loo heli lahaa dadka raadinaya nikaddiisa isla markaana bilaabaya inay la shaqeeyaan. Wuxuu nala wadaagaa:
Habka ugu waxtarka badan aya ah inaad ka hesho tartameyaashaada barta טוויטר. Markaad hesho tartamayaashaada, dhagsii si aad u aragto cidda soo socota. Dadkaasi guud ahaan waxay xiiseyn doonaan waxa ay ganacsigaagu sidoo kale ku deeqo. Haddaad raacdid dadkan, waxaad ogaan doontaa boqolkiiba inay kugu soo noqon doonaan. Markasta oo aad ku mashquuliso oo aad siiso waxyaabo wanaagsan oo ku jira boggaaga quudinta ee ah tiradaas ayaa noqon doonta.
Allan Pollett, oo קו takhasusay xayeesiinta SEO and websaydhka, ayaa tilmaamay in "hadafku wuxuu noqonayaa sidii loo heli lahaa dadka danaynaya waxa aad bixinayso ka dibna ku dhiirrigeliya iyaga oo raacaya. "
Sida lag soo xigtay Pollett, waa inaan aragnaa dadkan iyaga oo isticmaalaya erayada muhiimka ah ama ishtags oo ah kuwa ugu Caansan warshadeenna. Wuxuu intaa raaciyay, "Raadinta ayaa ka dhalan doonta isku dhafka tartamayaasha iyo kuwa la shaqeeya. Markaad diirada saarto helitaanka tartamayaasha waxaad ka heli Mapa Liisaska Horay loo sameeyey ee ah kuwa raacsan ee aad raadineyso. קאאדי אהאהן, ווקסאד קא הליי מפה ליסאקה ראקיטאנקה דאהר בוקול oo קון לאהא דאוהר קון גודאהוד דאיקייקאדו יאר איאדו לה אדגסאנאיו habkan. "
Pollett wuxuu sidoo cale na xusuusinayaa inaan taxaddar muujino markii aan raadineyno raacdeyaal, "Xusuusnow חזה ראזין שעווה kabadan dadka 200 maalin kasta maxaa yeelay raacitaanka intaas ka badan ayaa kaa mamnuuci קארה."
בארי Sproston, oo Ingiriis ah oo u dhashay waddanka Ingiriiska, ayaa dib u soo xasuusiyay עמוד uu דו דו יום הולדת Twitter-ka. "Bilaabidda Twitterka waxay noqon kartaa hawl adag. וולי ווקסאן xasuustaa sameynta koontadayda markasta oo aan daawado waxay ku fariisatay shan mucaahad אה wixii a u utahtah bilo dhamaadka. "
Wuxuu intaas ku daray haddii ay lambaro uun tahay inaad daba socoto oo aysan jirin wax grale oo uu aaminsan yahay side ugu wanaagsan ee lagu helo taageerayaal badan oo טוויטר אה ay lamid טאי טיי sanadkii hore – inaad raacdo khaa la aha.
Ka dib isticmaalayaasha kale ee טוויטר waa bilaash, fudud in la sameeyo iyo habka ugu fudud ee loo dhisi karo dhakhso soo socda. Tusaale ahaan, waxaan ku shaqeeyaa בלוג waqti socdaal ah si aan u raaco בלוגר קייל. Haddii aan tago oo raaco farabadan oo ka mid ah bloggerka socdaalka ee טוויטר hadda, ka dibna lambar muhiim ah ayaa i soo raaci doona maalmo yar gudahood.
Sproston wuxuu cadeeyay ב qofkasta uusan dib kuu raaci doonin oo ay kuxirantahay nooca dhaqaalahaaga. “Lambarka dhabta אה ee gadaal ka soo bixi doona wuxuu ku xirnaan doonaa warhadaha su’aasha, laakiin waxaan u adeegsaday qaabkan si aan uga caawiyo shirkadaha aan ka soo shaqeeyay bannaanka, jirdhiska iyo baabuurta. Si lagaga caawiyo inaad la socoto cidda gadaal ka soo daba socota iyo cidda aan daba gelin, waxaad isticmaali kartaa barnaamij side Crowdfire. “
אוואן כרמייקל, אאו אה קורה ואי גנאססדה, ווקסאי קוגולה טלינאיהן אינאי ביקסיאאן קייימו דהאראד אה וואה וובאו לאו הלו טאאגראייאל באדאן טוויטר אהה. ווקסו ידחי, "Jooji kaliya farriimaha farriimaha soo gudbinta. דריאל בדאן. סידה שעווה קיילה oo קייל, אינטה באדאן ee aad gelisay, aad u badan tahay inaad baxayso. "
Carmichael wuxuu ku darayaa inuusan fileynin natiijooyin cajiib אה Haddii Aadan Dadaal xoog Badan gelin.
אבוורי מציץ באדי ראבטו באאד מוג’יסו קרואורטאאדה ווייבין הל מאלין. Ku dhaji kaliya mawduuca aad runtii ku faani karto. מיהאד אבורייסה מרקהאס? Taasi waa sababta aadan haysan taageerayaasha טוויטר aad rabto. Tiradaada tiri waa xaqiiqda aad u qalantaa inaad leedahay. Tallaabooyinkaagu waxay kuu keeneen dhibicdan.
דניאל סקוקו, אאסאסאהה בוגגה, wuxuu nala wadaagaa hababka 4 si uu u koro xisaabtigiisa טוויטר:
Kordhin xisaabtaada טוויטר boggaaga internetka, oo ay ku jiraan qaybta "ראק אותנו" qaybta calaamadda אה.
Kordhin xisaabtarkaaga xisaabtaada bulsheed ee kale (טוסייל, פייסבוק, אינסטגרם).
ראדיי דדקה לה קסיזאב סלינטה טוויטר (raadi bogga Twitterka ee ishtagyada la xidhiidha) ee isku midka ah iyo talooyinka iswadaarsiga si loo raaco midba midka grale.
Websaydhku wuxuu leeyahay ב ka badan taageerayaasha ’75k טוויטר’ – Waxaan hubaa ב Scocco ay gelisay Shaqo badan.
Wadaagista waxyaabaha dhageystayaashayadu xiiseynayaan inay helaan taageerayaal badan oo טוויטר אה aya a ka fudud in la sheego. Sida uu qabo Harris Scahcter, “Marka ugu horeysa, waxaad u baahan tahay inaad caddeyso waxa ay tahay waxaad טהאי qof kasta sababta uu qof kuu raacayo.
– Tan waxaad ku samaynaysaa noolahaaga – ha ku khasaarin inaad noqoto mid guud ama aan kala sooc lahayn. מרקאי קו סאבסנטהאיי נוקסורקאאגה, טייאדה סיפיפיאן אוגו muuji khadkaaga tusaha si aad u kaydiso ballan qaadkii aad ku sameysay noolahaaga. Kaliya ha wadaagin fikradahaaga (ilaa aad horay caan u ahayd) ama waxa aad adigu iska leedahay. “
"Isku dheelitirid cusub iyo ku-tiirsanaanta." Schachter, oo אהאסאסאהה Optimizepri.me, ayaa soo jeedinaysa dhowr mashiin iyo adeegyo si aad u hesho wax wyn.
אתה יכול להתאים את התוכן של Google התראות, Talkwalker, subreddits-ka la xiriira, אתה יכול להוסיף את RSS RSS כדי שתוכל לקבל את הטוויטר שלך. Waxaad kuheleysaa kuwa raacsan adoo muujinaya inaad firfircoontahay oo aad bixiso qiimo.
"Ugu dambeyntii, noqo shaqsi. ציוצים של Jawaab u dir, la hadal dadka, Tweet מחדש, oo wadaagaan jacaylka, "איו ראקיייייי.
אתר: הופינגטון פוסט
אן טראן, קורהאגה הופינגטון פוסט ליו טאלייאהה ארמאהה בולשדה, ווקסו לייאהיי שעווה גאאר אה ווקסאן ג’קלאן לאהה אין איאן וואלהאנו
Muuji xirfadahaaga. טוויטר waa meel fiican oo lagu muujiyo awoodaada, gaar ahaan qorista iyo sawir qaadashada. Haddii aad tahay qof wax qora oo leh xog ku saabsan macluumaadka, לחץ על טוויטר. Isla waa isku midka ah sawirada cajiibka אה. Dadku waxay la wadaagi doonaan maqaashaada ama sawirada, טאני ווקסאי ku siinaysaa aragti aad u fara badan.
Halkan waxaa ku koran Tran פוסט Entrepreneur.com. Inkastoo boostada aysan aheyn kii ugu dambeeyey, talooyinka weli wali waa ay khuseeyaan.
توییتر wuxuu noqon karaa hab wanaagsan oo loogu qeybin karo nuxur taageerayaasha raacsan. Waxaan
Miyaad ka qayb qaadatay a Taleeshinka טוויטר גור גור? Hadaysan ahayn, maxaa kaa celinaya?
Sida Q1 2017, Twitter wuxuu ku saabsan yahay 330 milijuna isticmaalayaal firfircoon, illaa 10 milijuna oo ka timid Q4 2016 (Ilo). Inkasta oo koritaanka uu yahay mid gaabis ah, barkadda dadka isticmaala ayaa jira. Si loo helo dhagaystayaasha dhagaystayaasha ah, waxaan u baahannahay inaan dhisno raadiye joogta ah oo raacsan.
Poput shabakadaha kale ee bulshada, waxay u baahan tahay ballanqaadka waqtiga iyo tamarta si ay ugu guuleystaan ​​Twitter.
Kumanaan kun oo muslimiin ah ma dhacaan habeenkaas. Da li ste se prijavili na Twitteru, mogli ste na Twitteru, ako želite da se prijavite na sljedeći način:
Mawduucyada sii kordhaya ee taageerayaasha Twitter ayaa dhab ahaantii aan cusubeyn. Waxaan soo gaadhay khabiiro ka soo jeeda asal kala duwan sida bloger, marketer, wakiilka guryaha ijaarada, qoraaga, af-hayeenka, ganacsadaha, iwm. Wixii talo ah.
Halkaan waxaa ka muuqda waxyaabihii u muuqday u ay ka yimaadeen badankooda.
Dhiso tata dhagaystayaal ah. Tayada tirade badan.
Isku dhexmuuqda dadka raacsan, waxay ka jawaabaan Tweets iyo ku biiraan joornaalka Twitter.
Waa u aynaan dib u eegin aasaaska.
Ku mahadnaq dhammaan asxaabteena waqtiga ay ku qaataan inay kaga jawaabaan mawduucayaga ku saabsan sida loo helo taageerayaal badan oo Twitter ah. Waan hubaa in talooyinkan ay bixiyaan fikradaha qaar dib-u-habeyn istaraatiijiyadeena suuq-geynta iyo warbaahinta bulshada.
Haddii aan ku siin lahaa faahfaahin # 30 si aad u bilowdo sii kordhaya taageerayaasha Twitter – U sheeg "Zdravo" dadka kor ku xusan. Ku raaxayso!
Haddii aad leedahay vosak ka duwan inaad ku darto, nala soo socodsii Twitter ili Facebook.
"Jawaab celinta RTs, ka hadalka, kuwa raacsan ee cusub, faallooyinka ku saabsan tabaha dadka kale, ka qeybgalka xafladaha Twitter / sheekaysiga ayaa ah qaabab aasaasi ah lagu bilaabi karo kaya kaas kaye kai kaye kaey kaid," ayuu raaciyay.
Web lokacija: Inta badan
Wald waxa uu ka hadlayay qalabka Twitter-ka iyo hababka sida badan loo isticmaalo. Halkan, waxay soo jeedinaysaa qalabka 3 u ay gacan ka geysato kordhinta taageerayaasha Twitter,
Commun.It – Qalabka sidan oo kale ah ee aad u heshay dadka isticmaala Twitter-ka (Tweeps). Waa dhaqanka Twitter-ka inuu raaco dhabarka, gaar ahaan haddii aad moodid. Sidaa darteed, haddii aad iyaga raacdo, oo ay blog ku saabsan waxyaabaha la midka ah, waxay kugula socon doonaan adiga.
Tweepi – Qalab kale oo weyn oo aan isticmaalo. Waxaan hubiyaa inaan raaco Tweeps isku fikir ah. Tweepi wuxuu i ogeysiinayaa haddii aan seego vosak uun. Haddii aan sameeyo, waxay iga saari doonaan iyaga oo ka welwelsan cabirkooda saamiga aan hadda ku sharraxay. Tweepi wuxuu iga caawiyaa inaan hubiyo inaanan cidna u gafin.
Wald, bloganje iyo Tababaraha warbaahinta bulshada, ayaa sidoo kale xusay qaar ka mid ah habab dheeraad ah. Marka dadku dib ugu soo qortaan maqaalkayga taageerayaashooda, waan raacaa. Sida iska cad, iyagu waa isla fikir ama ma doonayaan inay raacitaankoodu akhriyo maqaalkayga. Markay dib ugu soo qoraan qoraalkeyga, waan raacaa. Maaddaama ay yihiin tata iskustva fikir ah, waxay u wanaagsan yihiin dib-u-soocelintooda. ”
“Waxaa jira dabin ay in badan oo suuqleey iyo milkiileyaasha ganacsigu ku dhex dhacaan … iyagoo ka walaacsan cabirrada ata.” Adam Connell wuxuu xusayaa u kuwa raacsan Twitter-ka inay yihiin kuwa kale ee qiyamka nacasnimada ah ee naga leexin kara waxa muhiimka ah.
"Waxay u egtahay inay hoos u dacdo si ay u hesho qaar ka sred ah taageerayaasha saxda ah, halkii ay ka heli lahaayeen taageerayaal horay."
Povežite ayaa ku xusan u uu boosto ku soo dir Blog Čarobnjaka,
Hadafkaagu waa inuu noqdaa sredina kor u qaadaya bartilmaameed iyo ka-qaybgal dadeed oo runtii rabta inay maqlaan waxa aad leedahay.
1. Ka dib email-ku-qor magaca CTA
Tani waa guul dhakhso ah oo fudud haddii aad maamusho blog, oo aad si firfircoon u iskustvu dayeyso inaad kobciso liistada emaylkaaga.
Tallaabooyin gaar ah oo ku jira habka aan u shaqeynayo, waxaan ku dari doonaa wicitaanada taleefanka ku dhiirigeliya macaamiisheyga u ay i soo raacaan Twitter (iyo sida bogga Facebook).
Moj CTA vosak u muuqataa inay jilicsanaan jilicsan tahay markii aan ku jiray saxeexa iimaylka – waxaad samayn kartaa vosak ka sii toos badan haddii aad doorbido.
Naravno, hab sahlan ayaa noqon lahaa u lagu daro widget-ga caan ah ee blog-ka ah – laga yaabee dhinaca kale.
Laakiin xaqiiqadu waxay tahay inaan helay natiijooyin aad u wanaagsan oo ka imanaya suuq-geynta emailka marka aan ka sameeyo warbaahinta bulshada. Sidaa awgeed, mudnaan ayaan u hayaa.
U kasta oo kobaca raacdadeyda Twitter-ka uu gaabis u yahay sidan, kuwa raacsan ee aan ku kasbado waxay noqon doonaan kuwo ku hawl gala. Hadduu Twitterku dhinto, wali waxaan haystaa liiskayga e-svibanj ..
Nidaam weyn oo lagu ansixiyo dadka isticmaala Twitter kuwaas oo ay u badan tahay inay ku raacaan adiga ayaa ah inaad raacdo, probaj xirto oo aad la xiriirto kuwa la wadaagaya boggagaaga blog-ka.
Želite li objaviti svoj blog na blogu o qoraalladaada, možete pročitati URL adrese i poslati Twitter na Twitteru. Laakiin, waxay kaliya la shaqeysaa qoraalo dhowaan dhaweyd.
Markii aan qoro URL-ga boostada, waxaan helaa liis la kala sooci karo oo ku saabsan kuwa la wadaagay boostada. Ka dib si toos ah ayaan uga daba socon karaa barnaamijka. Aniguna waan ku dari karaa ‘liistada’ influencer ‘.
Taasi micnaheedu waa inaad sameyso vosak ka badan jeclaan / dib ugu laabo boggagooda – waxaad u baahan tahay inaad lahadasho. Hadana si ka sii fiican, ku caawi iyaga vosak (taasi waa hab dhakhso leh oo lagu xasuusto).
Connell wuxuu raaciyay inaad sidoo kale ka gudbi karto kobcinta akoonadaada kale ee bulshada, ku dhiirigeliso kuwa raacsan inay ku soo biiraan liistada emaylkaaga oo aad u abuurto liis Twitter ah kuwa raacsan ee aad wadaa. "Haa, waa mid gaabis ah oo aan si fudud vosak u miisaamayn laakiin run ahaantii waa lacagbixin."
Web lokacija: Tomaslau
Tomas Laurinavicius, ganacsade qaab nololeed iyo blogger ka yimid Litva ayaa wadaagaya siyaabo muhiim ah oo uu 3 u adeegsan jiray inuu koro taageerayaasha Twitter.
"Ugu horreyntii, waxaad u baahan tahay inaad ku saxdo profil. Isticmaal sawirro tayo sare leh ee aad ufiiriso iyo dabool. Qoraan macluumaad iyo mawduuca bio. Bixi wixii kalsooni ah ee aad qabtid.
"Labaad, waxaad u baahan tahay inaad la socoto jadwalkaaga boostada. Waxaan jeclaan lahaa u aan istcimaalo istaraatijiyada 4-1-1 halkaasoo aan wadaagno 4 qaybo ka srednjem ah waxyaabaha la qiimeeyay, Retweet qofkale fariin Iyo ugu dambeyn la wadaag qaybta 1 ee CTA si aan u akhristo blogkayga, Iska qoro warsideeyda ama vosak Soo iibso. Buffer waa hubkeyga xulashada ee otomaatiga.
"Seddex, isdhexgeli dadka. Heerarka ka-qaybgalka ayaa aad ugu hooseeya warbaahinta bulshada. Da li ste shvatili da je riječ o Twitteru, objavite na Twitteru. Haddii uu qof su’aal weydiiyo, qaado daqiiqadaas si aad uga jawaabto oo u bixiso qiime. Waxaa laga yaabaa in aan la qiyaasi karin, laakiin waxa ay iga caawisay u aan raaco dheereeye sidan oo kale oo aan fikrado u lahayn tweeting buuxa tweetovi ispunjeni vezama oo aan cidna vosak akhrin. "
Web lokacija: Istaraatiijiyooyin farsamo
Calaamada "^" waxay la mid tahay erayga "umetnuti". Tusaale ahaan, waxaan iskustvo darsaday wadahadal lala yeeshay dhowr saamileyaal, waxaanay raaceen 5-10 saacadaha 2, iyo 30 waxay booqdaan goobtayda saacadda 1.
Tusaale yar, waan ogahay, laakiin taasi waa sida ay u shaqeyso. Taasi waa calaamaddayda, waa sida ugu fiican ee dariiqa caddaanka ah ee caddaynta ah ee loo helo taageerayaasha Twitter. Anigu waxaan shakhsiyan u leeyahay taageerayaal Twitter ah 6000, oo dhan oo aan ku helo asal ahaan. Haddii aad rabto in aad si dhab ah u dhisto koontadaada heer sare ah, waxaad u baahan tahay inaad ku rido shaqada. Waa shaqo waqti buuxa ah haddii aad runtii rabto u aad saxdaa.
Beddelka, Commbe, bloger iyo qoraha, ayaa sheegay u ay jiraan shirkado isticmaala bot i ay u helaan taageerayaasha. "Ama waxaad raaci kartaa wadada garaaca, oo isticmaal bot. Ma doonayo inaan bio je sheego, waxa ay u shaqeysaa u ay raacaan dadka raacsan. Shirkado badan ayaa sameeya.
Waxaad ciyaari kartaa ciyaarta ‘lasoco oo lasoco’ ama waxyaabo otomatik ah shay aad kuhesho halkaad ka helayso soo bandhigid badan, iyo fursado badan oo aad ku heli karto kuwa raacsan. Nasiib wacan! “Ayuu raaciyay.
Web mjesto: AllanPollett
Ako ste na Twitteru, Allan Pollett će vam pomoći da prevedete saaraa sidii loo heli lahaa dadka raadinaya nikaddiisa isla markaana bilaabaya inay la shaqeeyaan. Wuxuu nala wadaagaa:
Habka ugu waxtarka badan ayaa ah inaad ka hesho tartameyaashaada barta Twitter. Markaad hesho tartamayaashaada, dhagsii si aad u aragto cidda soo socota. Dadkaasi guud ahaan waxay xiiseyn doonaan waxa ay ganacsigaagu sidoo kale ku deeqo. Haddaad raacdid dadkan, waxaad ogaan doontaa boqolkiiba inay kugu soo noqon doonaan. Markasta oo aad ku mashquuliso oo aad siiso waxyaabo wanaagsan oo ku jira boggaaga quudinta ee ah tiradaas ayaa noqon doonta.
Sida laga soo xigtay Pollett, waa inaan aragnaa dadkan iyaga oo isticmaalaya erayada muhiimka ah ama ishtags oo ah kuwa ugu caansan warshadeenna. Wuxuu intaa raaciyay, "Raadinta ayaa ka dhalan doonta iskušenja dhafka tartamayaasha iyo kuwa la shaqeeya. Markaad diirada saarto helitaanka tartamayaasha waxaad ka heli kartaa liisaska horay loo sameeyey ee ah kuwa raacsan ee aad raadineyso. Caadi ahaan, waxaad ka heli kartaa liiska raacitaanka dhowr boqol oo kun illaa dhowr kun gudahood daqiiqado yar iyadoo la adeegsanayo habkan. "
Pollett wuxuu sidoo kale na xusuusinayaa inaan taxaddar muujino markii aan raadineyno raacdeyaal, "Xusuusnow ha raacin vosak kabadan dadka 200 maalin kasta maxaa yeelay raacitaanka intaas ka badan ayaa kaa mamnuuci kara."
Barry Sproston, oo Ingiriis ah oo u dhashay waddanka Ingiriiska, ayaa dib u soo xasuusiyay sida uu ugu bilowday bogga Twitter-ka. "Bilaabidda Twitterka waxay noqon kartaa hawl adag. Weli waxaan xasuustaa sameynta koontadayda markasta oo aan daawado waxay ku fariisatay shan mucaahad ah wixii ay u egtahay bilo dhamaadka. "
Wuxuu intaas ku daray haddii ay lambaro uun tahay inaad Daba socoto oo aysan jirin vosak kelj oo uu aaminsan yahay sida ugu wanaagsan ee lagu helo taageerayaal Badan oo Twitter ah ay lamid tahay TII sanadkii hore – inaad raacdo kuwa kelj oo adiga la sredine ah.
Kabb isticmaalayaasha kale ee Twitter e waa balaash, fudud in la sameeyo iyo habka ugu fudud ee loo dhisi karo dhakhso soo socda. Tusaale ahaan, waxaan ku shaqeeyaa blog waqti socdaal ah si aan u raaco blogger kale. Haddii aan tago oo raaco farabadan oo ka mid ah bloggerka socdaalka ee Twitter hadda, ka dibna lambar muhiim ah ayaa i soo raaci doona maalmo yar gudability.
Sproston wuxuu cadeeyay u qofkasta uusan dib kuu raaci doonin oo ay kuxirantahay nooca dhaqaalahaaga. “Lambarka dhabta ah ee gadaal ka soo bixi doona wuxuu ku xirnaan doonaa warshadaha su’aasha, laakiin waxaan u adeegsaday qaabkan si aan uga caawiyo shirkadaha aan ka soo shaqeeyay bannaanka, jirdhiska ba Si lagaaga caawiyo inaad la socoto cidda gadaal ka soo daba socota iyo cidda aan daba gelin, waxaad isticmaali kartaa barnaamij sida Crowdfire. ”
Waxaa laga yaabaa inaan proba dayi karno inaan raacno habka uu Tiru u isticmaalayo.
Web mjesto: EvanCarmichael
Evan Carmichael, oo ah qoraa iyo ganacsade, waxay kugula talinayaan inay bixiyaan qiimo dheeraad ah waa habka loo helo taageerayaal badan oo Twitter ah. Wuxuu yidhi, "Jooji kaliya farriimaha farriimaha soo gudbinta. Daryeel badan. Sida vosak kale oo kale, inta badan ee aad gelisay, aad u badan tahay inaad baxayso. "
Abuuri tweets u aad rabto in aad muujiso carruurtaada waaweyn hal maalin. Ku dhaji kaliya mawduuca aad runtii ku faani karto. Miyaad abuureysaa heerkaas? Taasi waa sababta aadan haysan taageerayaasha Twitter aad rabto. Tiradaada tiri waa xaqiiqda aad u qalantaa inaad leedahay. Tallaabooyinkaagu waxay kuu keeneen dhibicdan.
"Haddii aad rabto vosak badan, waxaad u baahan tahay inaad hagaajisid ficiladaada si aad u siiso qiime badan dadka dhagaystayaasha. U ogow sababta dhabta ah ee daryeelka. "
Kordhin xisaabtaada Twitter boggaaga internetka, oo ay ku jiraan qaybta "Raac nas" qaybta calaamadda ah.
U soo saari waxyaabo waaweyn si aad u hesho retvituje iyo saamiyo badan.
Raadi dadka leh xisaab celinta Twitter (raadi bogga Twitterka ee ishtagyada la xidhiidha) ee iskustva midka ah iyo talooyinka iswadaarsiga si loo raaco midba midka kale.
Websaydhku wuxuu leeyahay u ka badan taageerayaasha ’75k Twitter’ – Waxaan hubaa in Scocco ay gelisay shaqo badan.
– Tan waxaad ku samaynaysaa noolahaaga – ha ku khasaarin inaad noqoto mid guud ama aan kala sooc lahayn. Markay ku saabsantahay nuxurkaaga, tayada sifiican ugu muuji khadkaaga tusaha si aad u kaydiso ballan qaadkii aad ku sameysay noolahaaga. Kaliya ha wadaagin fikradahaaga (ilaa aad horay caan u ahayd) ama waxa aad adigu iska leedahay. ”
"Isku dheelitirid cusub iyo ku-tiirsanaanta." Schachter, oo ah asaasaha Optimizepri.me, ayaa soo jeedinaysa dhowr mashiin iyo adeegyo si aad u hesho vosak weyn.
Waxaad adeegsan kartaa adeegyo sida Google Alerts, Talkwalker, subreddits-ka la xiriira, iyo akhristaha RSS ee kuu gaar ah si aad u hesho waxyaabo cusub oo xiisa leh oo aad ku soo daabacan karto Twitter. Waxaad kuheleysaa kuwa raacsan adoo muujinaya inaad firfircoontahay oo aad bixiso qiimo.
Web mjesto: Huffington Post
Ann Tran, Huffington Post iyo la taliyaha arrimaha bulshada, wuxuu leeyahay vosak gaar ah Waxaan jeclaan lahaa inaan kula wadaagno:
Muuji xirfadahaaga. Twitter waa meel fiican oo lagu muujiyo awoodaada, gaar ahaan qorista iyo sawir qaadashada. Imate li pitanja o vosku qora oo leh xog ku saabsan macluumaadka, a Twitter Twitter. Isla waa iskustva midka ah sawirada cajiibka ah. Dadku waxay la wadaagi doonaan maqaashaada ama sawirada, tani waxay ku siinaysaa aragti aad u fara badan.
טוויטר wuxuu noqon karaa hab wanaagsan oo loogu qeybin karo nuxur taageerayaasha raacsan. Waxaan